ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးကို ဆန္ဒပြမယ့် လိင်တူချစ်သူများရဲ့ အနမ်းပွဲတော်ကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးကို ဆန္ဒပြမယ့် လိင်တူချစ်သူများရဲ့ အနမ်းပွဲတော်ကြီး
ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးကို ဆန္ဒပြမယ့် လိင်တူချစ်သူများရဲ့ အနမ်းပွဲတော်ကြီး
Posted by Phyo on Oct 27, 2010 in News, World News | 22 comments
သက်တံ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့။ October 27, 2010
စပိန်နိုင်ငံက လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ အုပ်စုလိုက် အနမ်းပွင့်ချွေခြင်းအားဖြင့် ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးကို ကြိုဆိုကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကက်သလစ် ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အမြင့်မြတ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာ စပိန်နိုင်ငံကို သွားရောက် လည်ပတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူကြွရောက်လာတယ် ဆိုရင်ပဲ လိင်တူချစ်သူတွေက ဇာတ်စင်မြင့်တစ်ခုကို သူ့ရဲ့ အလာလမ်း မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ဆောက်လုပ်ပြီး ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီး ထွက်လာတာနဲ့ တပြိုင်တည်း တက်ညီလက်ညီ ပွေ့ဖက် နမ်းရှုပ်ပြခြင်းဖြင့် ဆန္ဒပြကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာ လာမယ့် စနေနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၇ရက် မနက် ၉နာရီမှာ မြို့တော် Barcelonaရဲ့ ရင်ပြင်မှာရှိတဲ့ Sagrada Familia လို့ခေါ်တဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ရောက်ရှိလို့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်တူချစ်သူတွေ အခွင့်အရေးတွက် လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ တယောက်ဖြစ်တဲ့ Carole Marylene က ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေ အပေါ်မှာ မုန်းတီးတဲ့ အမြင်တွေ အတွက်ကြောင့် အခုလိုမျိုး အနမ်းနဲ့ သူကိုပြန်ပြီး ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ “သူရောက်လာတယ် ဆိုတာနဲ့ ကျမတို့ ယောက်ျားအချင်းချင်း မိန်းမအချင်းချင်း သူ့ရှေ့မှာတင် အားရပါးရ နမ်းပြကြမှာပါ”လို့ စပိန်အခြေစိုက် EFE သတင်းစာဌာနကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကျမကတော့ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ဂေး တွေကို အရမ်းမုန်းတဲ့ တော်ဝင် ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးက ဂေးတွေ နမ်းပြတာကိုတွေ့ရင် မျက်နှာဘယ်လိုမျိုး ဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာကို တွေးရင်း ကျမ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတာပဲ။ အနမ်းကလည်း တော်လှန်ရေးတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြန်ပြီပေါ့။
ဒီအနမ်းဆန္ဒပြပွဲနှင့် ပတ်သက်လို့ facebook အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ လူတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့ လူပေါင်း တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျော် တက်ရောက်ဖို့ အစီစဉ် ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် facebook က အဲဒီစာမျက်နှာကို ဖျက်ပစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် အုပ်စုတစ်စုက ပြန်ပြီးတော့ ထပ်တင်ထားပြန်တာ လူပေါင်း ကိုးရာကျော် ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီး အင်္ဂလန်ကို လာရောက်လည်ပတ် ခဲ့တုန်းကလည်း ကွန်ဒုံးတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ လူပေါင်း နှစ်သောင်းကျော်ရဲ့ ဆန္ဒပြချင်းကို ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့အရှေ့ အခြောက်တွေ ဒါမျိုးလိုလာလုပ်လို့ကတော့ စတွေးနဲ့ ပတ်ပစ်မှာ။ ရွံစရာကြီးဗျာ။ တွေးကြည့်တာ ယောကျားချင်း နမ်းနေတာကြီး ကြည့်ပြီး စိတ်လေတာ…
သတင်းကြီးကလည်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေလို့ဘဲ တွေးမိတယ်..
ပြောရင် မိုက်ရိုင်းတယ် ဖြစ်အုန်းမယ်.. အခြောက် အခြောက်..
မြန်မာပြည်က ဟာတွေ သွားကြမလားဟေ့.. မန်းလေး ဂေဇတ်က ပွိုင့်တွေ ထုတ်ပေးပြီး ပွဲမှာ ပါဖို့ စပွန်ဇာ ပေးမလို့တဲ့.. ဟာဟ..
နီးနီးနားနားဆိုရင် အင်းစိန်တို့ ..လှိုင်သာယာတို့ က ဂေးလ် တွေပါ ဒိုးကြမှာမြင်ယောင်သေးတယ်
ဒုက္ခပါပဲဗျာ … အစကတည်းကမှ သူတို့ ရဲ.စိတ်တွေက သဘာဝကိုဆန်.ကျင်နေရလို့Normal မဟုတ်ပါဘူးဆိုမှ … ဆုံးမပေးမဲ့/ပြုပြင်ပေးမဲ့ လူကမရှိ၊ ရှိပြန်တော့လဲ နားမ၀င်။ နားမ၀င်တဲ့ အပြင် ဘာတွေလုပ်ပြကြအုံးမလဲ မသိဘူး။ (ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးကိုတောင် နမ်းပြကြမှာဆိုတော့လေ)
ကမ္ဘာပျက်မယ်လို့ ဘယ်သူက ပြောလို့လဲ။ ၂၀၁၂ ဇာတ်ကားကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်လို့ မပြီးသေးဘူး ထင်တယ်နော်။
မဆိုင်လိုက်တာဗျာ။ အများနဲ့ မတူတိုင်း abnormal ဖြစ်ရကောလား။ လောကမှာ ကိုယ်မကြိုက်ပေမယ့် လက်ခံနေရတာတွေ အများကြီးပဲ။ ကိုယ် သဘောကျတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်တည်ခွင့် ပေးမယ်ဆိုတာ ရင့်ကျက်မှု မရှိတဲ့ ကလေးစိတ်ပဲ။
မန္တလေးသားရေ.. အခြောက်တွေရှေ့ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမလာနမ်းလို့ တံတွေးနဲ့ပြန်အထွေးခံရရင်ကော ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
ကိုယ့်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရင် လူ့ အခွင့်အရေးလို့ အသံကောင်းဟစ်နေကြပြီး အခြားလူ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာကျတော့ တသွေးတသံတမိန့် လုပ်ပြီး တားမြစ်ချင်လို့ ရသလား။
ဂေးဖြစ်နေတဲ့ လူတိုင်းက ပျော်လွန်းလို့ စတန့် ထွင်ပြီး ဖြစ်နေတာ တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလဲ မရတာမို့ လို့ပါ။
ဒါကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ထားစေချင်ပါတယ်။
အေးဆေးပေါ့.. ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်လို့ လက်ခံနိုင်ဘူးပြောတာ။ ရောင်ခြည်လေး လက်ခံရင် လက်ခံပေါ့.. လက်ခံနိုင်တဲ့ကြောင်း လာပြီးနမ်းပြရင် ပါးစပ်ပါမက ဟိုဟာပါ အစစ်ပေးလိုက်အုံးမှာလို့ ပြောလိုက်ပေါ့။
မသိလို့မေးအုံးမယ်နော်။ “ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလဲ မရတာမို့ လို့ပါ။” ဆိုတာကို နားမလည်ဘူး။ တခါက ဘောပြားတယောက် ရှိဘူးတယ်တဲ့ သူက ယောကျားတွေကြားမှာ လိုက်ယားလိုက်ယားနဲ့နေတာဗျာ။ ညဆိုလည်း ယောကျားတွေ ကြားဂီတာလိုက်တီးရတာနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ရင် လိုက်သောက်၊ ဘီယာသောက် လိုက်သောက်နဲ့ သူ့ကို သူ သူ ဘာယောကျားလေးလိုနေနေတာ။
တနေ့ ဘယ်ကောင်က PLAY ပေးလိုက်လဲမသိဘူး။ ဗိုက်ကြီးသွားတာ။ အဲဒီက စပြီး အဲဒီဘောပြားမလဲ နဂို ပုံစံ၊ ကိုယ်ဘ၀ကို သိသွားပြီး မိန်းမလို နေလိုက်ရတော့တယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် ရောင်ခြည်မေးတဲ့ ဘယ်လို့မှ ပြောင်းမရလို့ ဆိုတာကို နားမလည်ဘူးဗျာ။
အဲ အခြောက်တွေမှာ ဒီဘောပြားတွေလို ပြသနာရှိမယ်ဆိုရင် (ဗိုက်ကြီးသွားတာ) ရှိမယ်ဆိုရင် အခြောက်လောကက နေ ပုံမှန်ဖြစ်သွားမဲ့ ကောင်တွေ အများကြီးဘဲလို့ ထင်တာဘဲဗျာ။
အတွဲတွေ မြင်မကောင်းဘူး ဖြစ်နေကြတာ
If you say only ” လက်မခံနိုင်ဘူး “, It is OK.
” ငါ့အရှေ့ အခြောက်တွေ ဒါမျိုးလိုလာလုပ်လို့ကတော့ စတွေးနဲ့ ပတ်ပစ်မှာ။ ရွံစရာကြီးဗျာ ”
It is very rude & it isadiscrimination
If you say it out in Australia ( in public ),
you will be arrested/prosecuted ( go to jail ).
It seems, some of our Myanmar people need to learn more about democracy & human rights.
လောကကြီးက သဘာဝမကျတာဆို သိပ်ကြာကြာလက်မခံတက်ဘူး ……
အားလုံးကကိုယ်ဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ ပဲလိုတယ်။အားလုံးပဲငြင်းခုန်မနေကြပါနဲ့ ။
ရောင်းရင်းတို့ ရေ ဆရာဆူဒိနင် ရဲ့ အမြင်လေးကို ဝေ ငှလိုက်ပါတယ်
ဖြစ်ချင်တာလည်းမ ဖြစ်ရ၊ မဖြစ်ချင်တာတွေလည်း ဖြစ်ရသော လူ့ ဘဝ၏ ကောက်ကွေ့မှု အထွေထွေ ထဲ တွင်သူတို့ ကို လည်း သံသရာ၏သားကောင်းများအဖြစ်သာ မြင်ပါသည်။ ဆေးပညာရှုထောင့်မှ ကြည့် လျှင် မိခင် နှင့် ဖခင် တို့ ထံမှ လက်ခံ ရရှိသော ခရိုမိုဆုမ်း(ခေါ်) ဗီဆဆောင်မျှင်များ ဖွဲ့ စည်းပုံနှင့် ဟော်မုန်းဓာတ်တို့ ကြောင့် လိင်ကွဲ ချင်းစုံမတ်ခြင်း၊ လိင်တူ ခြင်း တို့ ဖြစ်လာရပါသည်။ တစ်နည်း ဆိုသော် လူဖြစ်လာရသူ တစ်ဦးအနေ ဖြင့် ထိုဗီဇဆောင် မျှင်များကို မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိသလို သူ့ ကိုလူဖြစ်အောင် မွေးခဲ့ ကြသူ မိခင် ဖခင် များအနေနှင့် ကလည်း အဆိုပါ ဗီဇ ဆောင်မျှင်များကို ဘယ်အတိုင်း အဆဖြင့် ရောစပ် ကာ လူဖြစ်စေ မည် ဟု ထိန်းချူပ်နိုင်စွမ်း မရှိ သည်မှာလည်း အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ပညာ သဘောအရလည်း လူတွင် မွေးကတည်းက လိင်တူချင်း စုံမက်စိတ်နှင့် လိင် ကွဲကိုစုံမက်စိတ် နှစ်မျိုးလုံး ပါရှိလာသည်။ အသက် အရွယ်ရလာချိန်၌ အဆိုပါဗီဇ ဆောင်မျှင်များ နှင့် ဟော်မုန်းဓာတ်ထုတ်လုပ်မှု အတိုင်းအဆတို့ ပေါ်လိုက်ပြီး တစ်ဖက်ဖက် ကို အားပိုသန်သွားခြင်းသာ ရှိပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားအရမှု အတိတ်ကံ ကြွေးကို ပေးဆပ်ရသော သဘောရှိပါသည်။ ဆေးပညာ အရ ပဲ ကြည့် ကြည့်၊ စိတ်ပညာရှုထေင့်ကပဲ ကြည့်ကြည့်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်နှင့်ပဲကြည့် ကြည့် သေချာလှသည့်အချက် မှာတော့ ထိုသို့ လိင်တူချင်းစုံမက် သည့် ကိစ္စမှာ ထိုသို့ဖြစ်နေသူ၏ ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘဲ သဘာဝ၏ ပြဌာန်းမှုသာဖြစ်သည်။
အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာဆောင်ရသော် အသားဖြူ ခြင်း၊ ညို ခြင်း၊ မည်းခြင်း တို့ ကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ အရပ်မြင့်ခြင်း၊ နှိမ့် ခြင်းတို့ ကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ ရုပ်ရည်လှခြင်း မလှခြင်း တို့ ကဲ့သို့ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူကမျှ မည်သည့် နည်းနှင့်မျှပြုပြင် ပြောင်းလဲ၍လည်းမရ၊ ခြယ် လှယ်ထိန်းချုပ်လို့လည်းမရနိုင်သော လူ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာတည်း။
တိရစ္ဆာန်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်ရှိတာ၊ အပျိုဖော်လူပျိုဖော်ဝင်ခါစ ဆယ်နှစ်ကျော်ခလေးတွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်ရှိတာလည်း ဗီဇ ဆောင်မျှင်များ နှင့် ဟော်မုန်းဓာတ်ထုတ်လုပ်မှု အားသန်ရာဖက်သို့လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလို့ရမှာပေါ့နော်။ ဆူဒိုနင်ပြောသလို မည်သူကမျှ မည်သည့် နည်းနှင့်မျှပြုပြင် ပြောင်းလဲ၍လည်းမရ၊ ခြယ် လှယ်ထိန်းချုပ်လို့လည်းမရနိုင်သော လူ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာတည်းလို့ ပြောလို့ရမှာလား…မေးကြည့်ပေးပါအုံး..။ Discriminate မလုပ်ကြေးနော်..။
Solomon ပြောတာကိုလက်ခံပါတယ်။ခုတော့ လိင်တူချစ်သူကြီး ရွာထဲမှာဘယ်မှာပုန်းနေပါလိမ့်။ပေါ်မလာသေးပါလား
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှုံးလို့ ရှုံးနေမှန်း မသိကြတာပါဗျာ။
လူ့ဘဝဆိုတာ ရခဲတယ်… ယောင်္ကျား ဘဝကပိုရခဲပါတယ်။
ရလာတဲ့ လူ့ဘဝ ..ရလာတဲ့ သာသနာတွင်းမှာ ဆုံးရှုံးခံရတယ်လို့ကွာ….
အေးလေ..ဘာသာမတူရင်တော့ အယူအဆ တမျိုးပေါ့လေ….။
Solomon ပြောတာကိုလဲထောက်ခံပါတယ် ။ဗုဒ္စဘာသာအရပေါ့ ကံ/ကံ၏ အကျိုးပေးလေ။ ကိုကြောင်းကြီးပြောတာ အရကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘဝရဲ့ ကံကြောင့် ဖြစ်လာပေ မဲ့ နောက် မဖြစ်အောင် စိတ်ကို ချုပ်ထိန်းနိုင်ရမှာပေါ့ ဘယ်ဘာသာနဲ့ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လေ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာ ခွဲ ခြားနိုင်တဲ့ ‘ လူ’ ဖြစ်ရ မှာပေါ့။
သြော်.. အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ တဲ့..
အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း… အွင်…. စကားလမ်းကြောင်း..က ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်…
.. ဘာမှမမြဲပါလား… လို့ပြောချင်တာပါ..။